नवाजुद्दीन सिद्धीकीको फिल्मबाट किन बाहिरिइन् मौनी राय ? - Sabal Post
नवाजुद्दीन सिद्धीकीको फिल्मबाट किन बाहिरिइन् मौनी राय ?
एजेन्सी -नवाजुद्दीन सिद्धीकीको फिल्म ‘बोले चुडिया’बाट अभिनेत्री मौनी राय बाहिरिएकी छन् । उनको प्रोड्युसरसँग भनाभन भएको थियो । मेकर्सले अभिनेत्री मौनी रायलाई गैर–जिम्मेवार भएकी आरोप लगाएको थियो । निर्माता राजेश भाटिया आफैले फिल्मबाट मौनी राय बाहिरिएकी जानकारी गराएका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियाको खबर अनुसार– निर्माता राजेशले भने ‘हो अभिनेत्री मौनी राय यो फिल्मको हिस्सा रहिनन् । अब हामीले फिल्मको लागि एक नयाँ अभिनेत्री लिनेछौं ।’ उनले् थपे, ‘बोले चुडियाको डेट फाइनल भएपछि उनले आफ्नै तरिकाले सो समयमा अन्य कुनै प्रोजेक्टलाई दिन चाहन्थिन् । उनले स्त्रिप्टलाई वेवस्ता गर्दै अनप्रोफेशनल तरिकाको ब्यवहार देखाइन् । उनी मुस्किकले वर्कसप र रिडिङमा सामेल हुन्थिन् । त्यसैले उनलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्पनै थिएन ।’यता अभिनेत्री मौनी रायको स्पोकम्यानले भने, ‘अब यो फिल्मको हिस्सा रहिनन् मौनी । उनले पहिल्यै केही फिल्ममा काम गरिसकेकी छन्, भने आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेकी छन् ।’
अर्को तर्फ राजेश भाटियाले करियरको दोस्रो फिल्म बनाउँदै छन् । उनको पहिलो फिल्ममा पनि विभिन्न विवादमा तानिएको थियो । जहाँ एक बरिष्ठ अभिनेतालाई हस्तछेप गरेको आरोप उनलाई लगाइएको थियो ।त्यस्तै दोस्रो फिल्ममा आएर पनि विवादमा मुछिएका छन्, उनले अभिनेत्री मौनी रायलाई अनप्रोफेसशन भएकी बताएका छन् । यो फिल्मलाई नवाजको भाई शम्स सिद्दीकीले निर्देशन गरिरहेका छन् ।
लिस्नु कप फुटबल : न्यू सिर्जना करौजियाद्वारा…
मुटुरोगको प्रमुख कारण चिनी, चुरोटजत्तिकै हानिकारक
शिक्षामन्त्री भन्छन – ‘मेडिकल कलेजले १५ दिनभित्र…
रुपन्देहीमा ब्याट्मिन्टन् प्रतियोगिता आयोजना हुदै